Indlu enkulu ejikelezwe yindalo, iiyure eziyi-2 ukusuka eParis - I-Airbnb
Indlu enkulu ejikelezwe yindalo, iiyure eziyi-2 ukusuka eParis
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguCamille
I-Malassise, indlu enkulu yophawu lwe-18, kufutshane neVezelay, iChablis kunye nesidiliya saseIrancy. Efumaneka kumasipala waseMeyly le Château. Indlu ekhanya kakhulu. Indawo egcwele imbali.
Indawo ezolileyo, ezolileyo, ejikelezwe yindalo. Ilungele ukufumanisa ingingqi yethu uhamba ngeenyawo, ngebhayisekile : iRochers du Saussois, iNivernais Canal, iYonne neCure River, iMorvan Park. Ukunyuka intaba, ukukhwela ihashe, ukuhamba ngebhayisekile entabeni, i-geocaching
I-Malassise likhaya lendlu enkulu endala yokulima, iindonga ziqengqelekile kwimbali. Indawo ayinangxaki, amasimi nehlathi lijikeleze indlu, iindlela ezininzi zokuhamba zihamba ngqo endlwini.
Ehlotyeni , ingangena emva kwexesha egadini nangomculo. Akukho mmelwane. Siyibuyisele indlu ngoxa siqinisekisa ukuba ihlala iyinyani. Kumgangatho osezantsi, ikhitshi elikhulu - igumbi lokuhlala, elilungele ukwabelana ngokutya nosapho okanye iqela labahlobo. Ebusika, isitovu esikhulu esivutha ngeenkuni sishisa umoya wegumbi elikhulu, igumbi lokutyela, iimitha eziyi-4 ngaphantsi kwesilingi esineempawu ezibonakalayo kunye neBurgundy slab. Ehlotyeni ungonwabela igadi enkulu eyenziwe ngamaplanga, kufutshane nendawo yokoja kunye neglasi entle yewayini. Ukuqubha kukude ngeekhilomitha eziyi-3.
Phezulu, igumbi lokulala elinebhedi elala abantu ababini, igumbi elikhulu lokuhlala elinesofa ekwayibhedi etofotofo. I-Dvd player enee-DVDs ezikhoyo, imidlalo yebhodi, iincwadi, izithethi onokuzifaka kuzo izixhobo zakho (ikhompyutha okanye ifowuni...).
Elinye igumbi lokulala elinebhedi elala abantu ababini neebhedi ezimbini ezilala umntu omnye. Xa ufika, iibhedi zenziwe, iitawuli ziyafumaneka ukuba uzisebenzise.
Ikhothi yosana nesitulo sokutyisela usana ziyafumaneka xa kucelwa.
Indawo yokubhaka ikude ngeekhilomitha eziyi-3, ivenkile yokutya ivula iintsuku eziyi-7 ngeveki ukususela NGO-7: 30 EKUSENI ukuya kutsho ngo-9 ebusuku ukuya kwimizuzu eyi-10.
Iindledlana ehlathini ziqala phambi kwendlu. Amathuba amaninzi okunyuka intaba , ukuqubha kwimilambo yaseYonne naseCure. Iilali ezintle ezijikeleze : I-Milely le Château, i-Merry sur Yonne, i-Chatel Censoir, imizuzu eyi-30 xa uqhuba: i-Vezelay, i-Accolay, i-Arreon sur Cure kunye nemiqolomba yayo, i-Clamecy, i-Avallon, i-Noyers sur Serein, igadi yeChablis. Ngaphandle kokukhankanya isixeko saseAuxerre, icawa yaso, indawo yaso yesixeko kunye nendlu entle eyenziwe ngamaplanga... iiyure ezi-2 ukusuka eParis, yenye ihlabathi elikulindileyo!
Umbuki zindwendwe ngu- Camille
ndikwamkela nabakhweli beentaba abakhwele ihashe, kwindawo yokuphumla okanye njengenkwenkwezi.
Ndiyakuthanda ukukhwela ihashe, ndikuthanda ukuhambahamba emaphandleni ndize ndisoloko ndifumana iindlela ezintsha.
Ngexesha lokuhlala kwakho, ndingakucebisa ngeendlela zokunyuka intaba, iindawo onokutyelela kuzo, iivenkile zokutyela ungaphoswa, iindawo okanye ufumane iwayini emnandi kunye neemveliso zasekuhlaleni.
Ndiyakuthanda ukukhwela ihashe, ndikuthanda ukuhambahamba emaphandleni ndize ndi…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Mailly-le-Château